War Saxaafadeed laga soo saaray Shir Odayaasha Muqdisho yeesheen | Najah Media Network
Bogga Hore Wararka Manta War Saxaafadeed laga soo saaray Shir Odayaasha Muqdisho yeesheen
War Saxaafadeed laga soo saaray Shir Odayaasha Muqdisho yeesheen
Odayaasha Dhaqanka iyo waxgaradka magaalada Muqdisho oo maanta kulan ku yeeshay Hotelka Hayat ayaa lagu soo dhaweeyay Shirkii Madaxda dowlada Federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada ku yeesheen magaalada Dhuusomareeb.
Waxgaradkii kulanka ka hadlay ayaa si isku mid ah usoo dhaweeyay shirka ka dhacay magaalada Dhuusomareeb iyo go’aanadii kasoo baxay, waxa ayna Odayaasha ku baaqeen in la hirgaliyo qodabadii shirkaasi kasoo baxay .
Odayaasha dhaqanka Muqdisho ayaa sidoo kale ka digay in la sameeyo mudo kororsi nuucii ay ku timaadaba, waxa ayna ku baaqeen in la qabto Doorashola wada ogol yahay oo waqtigeeda ku dhacda.
Qaar kamid ah Odayaashii kulanka ka hadlay ayaa sidoo kale wax laga xumaado ku tilmaamay xil ka qaadistii deg dega aheyd ee lagu sameeyay Ra’isul Wasaare Xasan Cali Kheyre.
Maanta oo taariikhdu tahay 25, July, 2020 kulan ay isugu yimaadeen Odayaasha Dhaqanka, Cuqaasha, Siyaasiyiinta, Haweenka, Dhalinyarada iyo wax Garadka ku nool Magaalada Muqdishu ee Caasimada Soomaaliya waxaa ka soo baxay qodobada soo socda.
1. Waxaan soo dhowaynaynaa heshiiskii dhexmaray Dowlada Federaalka iyo Dowlad Gobaleedyada ee ka dhacay magaalada Dhusamareeb ee Galmudug. Waxaan bogaadinaynaa in lagu heshiiyay in Doorasho la wada ogol yahay ay ku dhacdo waqtigeeda.
2. Waxaan ka digaynaa in dalka la geliyo hubaal la,aan taas oo keeneeysa, Khalalaase siyaasadeed, mid amni iyo Mid dhaqaale.
3. Waxaan marna la aqbali-karin muddo kororsi, marka uu dhamaado waqtiga Hey’adaha Dastuuriga ah ee dalka.
4. Waxaan ugu Baaqaynanaa Madaxda dowladda federaalka iyo dowlad gobaleedyada in ay dhammays tiraan heshiiska doorashooyinka.
5. Waxaan u soo jeedineeynaa gudoonka labada Aqal, ee Barlamaanka Jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya in ay soo celiyaan wada shaqeeynta Barlamaanka, si loo gaaro howlaha wax ku oolka ah ee barlamaanka, dalkana looga gudbiyo xiliga kala guurka.
Maqaal horeRaisul-wasaarihii hore ee dalka oo kusoo jeedda Muqdisho
Maqaal XigaRaisul-wasaare Kheyre oo soo gaaray Muqdisho